Imigomo Yokusebenzisa & Inqubomgomo yobumfihlo | mobilecasinofreebonus.com |
Ikhaya » I Phone Casino Bill & Hambayo Slots Amaphromoshini £ 20, £ 10, £ 100, £ 1000 FREE! » Imigomo Yokusebenzisa & Inqubomgomo yobumfihlo | mobilecasinofreebonus.com
Web Site Imigomo Nemibandela yokusebenzisa & Inqubomgomo yobumfihlo
Ngokufinyelela le webhusayithi, uyavumelana ukuba sizibophezele kule Imigomo web site kanye Conditions of Use, yonke imithetho efanelekile kanye neziqondiso, futhi uyavuma ukuthi unesibopho ukuhambisana nemithetho yendawo esebenzayo. Uma ungavumelani naleyo migomo, awuvunyelwe usebenzisa noma ukufinyelela kule site. Izinto eziqukethwe kule site web zivikelwe copyright futhi trade mark umthetho osebenzayo.
Imvume nikunikiwe ukulanda okwesikhashana ikhophi yezinto (ulwazi noma isofthiwe) kuwebhu MobileCasinoFreeBonus.com site for siqu, non-commercial wokubuka ehlala kuphela. Lona ngumuntu onganikezwa ilayisensi, hhayi ukudluliselwa zetayitela, futhi ngaphansi kwale layisensi ungase hhayi:
shintsha noma ukopisha izinto;
sebenzisa izinto nganoma iyiphi injongo commercial, noma obala (commercial noma non-commercial);
azame ukuba kuyekwe noma ukuhlanekezela ukuklama noma iyiphi isofthiwe on web MobileCasinoFreeBonus.com site;
ukususa noma yiliphi ilungelo noma ezinye netinkhomba nokuphathelene kusukela materials; noma
ukudlulisa izinto omunye umuntu noma “mirror” materials kunoma iyiphi enye iseva.
Le layisensi kuyakuba ngokuzenzakalelayo sokuqeda uma esephula kwalezi zingqinamba futhi kungenzeka Ingayekiswa MobileCasinoFreeBonus.com nganoma isiphi isikhathi. Phezu kunqanyulwe isivumelwano se yakho yokubuka lezi zinhlobo zezindwangu noma phezu ukuqedwa kwalesi ilayisensi, Ubabhubhise iziphi izinto ukulandwa yifa lakho noma nge-elekthronikhi noma ephrintiwe.
Izinto kuwebhu MobileCasinoFreeBonus.com site anikezwa “njengoba kunjalo”. MobileCasinoFreeBonus.com kwenza akukho amawaranti, wazwakalisa noma somlomo, futhi ngalokhu uyawachitha kanye negates zonke ezinye amawaranti, kuhlanganise ngaphandle komkhawulo, esicatshangwayo nezimo okuthengisa, ukuqina ngenjongo ethile, noma non-athikameza okuqamba impahla noma amanye amalungelo. Okwengeziwe, MobileCasinoFreeBonus.com akaqinisekisi noma enze noma yimuphi izethulo mayelana nokufaneleka ukunemba, cishe imiphumela, nofana nokwethenjelwa ukusetshenziswa kwe-materials web-Internet-Inthanethi noma ngenye eziphathelene izinto ezinjalo noma kunoma iyiphi amasayithi ahlobene nathi ngenxa kule sayithi.
In umcimbi kuyakuba MobileCasinoFreeBonus.com noma abahlinzeki bawo kube nesibopho sokukhokhela amademeshe (okubala, ngaphandle komkhawulo, amademeshe ngenxa ukulahleka kwedatha noma inzuzo, noma ngenxa yebhizinisi kokuphazanyiswa,) ezivele ngenxa ukusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa izinto MobileCasinoFreeBonus.com sika engosini ye-Internet, ngisho noma MobileCasinoFreeBonus.com namkha umjameli MobileCasinoFreeBonus.com ogunyaziwe yazisiwe ngomlomo noma ngokubhala ukuthi kungenzeka umonakalo onjalo. Ngenxa yokuthi abanye ethile azivumeli imikhawulo esicatshangwayo, noma ukulinganiselwa sezomthetho nezisho noma ohambisana, lezi ukulinganiselwa kungenzeka kungakuthinti wena.
5. Izibuyekezo kanye errata
Izinto kokuvela web MobileCasinoFreeBonus.com site kungahlanganisa lobuchwepheshe, typographical, noma amaphutha enezithombe. MobileCasinoFreeBonus.com akaqinisekisi ukuthi noma iyiphi yezinto on web yayo site kunembile, ephelele, wamanje noma. MobileCasinoFreeBonus.com ingenza izinguquko materials oluqukethwe web yayo site nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. MobileCasinoFreeBonus.com asipheli, Nokho, enze noma yimuphi ukuzibophezela ukuvuselela izinto.
MobileCasinoFreeBonus.com engazange sibuyekezwe yonke amasayithi ahlobene nathi ngenxa web-Inthanethi yayo site futhi akuyena obangela okuqukethwe noma iyiphi isayithi ezinjalo kuxhumene. Lokhu kufakwa iyiphi isixhumanisi akusho ukuvumela MobileCasinoFreeBonus.com of site. Ukusetshenziswa kwanoma yiluphi ezinjalo kuxhumene web site usengozini yomsebenzisi siqu.
7. Imigomo yokusetshenziswa Ukulungiswa
MobileCasinoFreeBonus.com angase buyeketa nalemibandela yokusebenzisa web yayo site nganoma isiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le site web uvumelana baboshwe inguqulo ke wamanje we le Migomo Nemibandela yokusebenzisa.
8. Ebusayo Law
Nanoma yisiphi isicelo eziphathelene web MobileCasinoFreeBonus.com site kuyobuswa imithetho State of London ngaphandle kokubheka kokuphambana kokunikelwa komthetho.
Izimfuneko Nemibandela esebenzayo Yokusebenzisa a Site Web.
Ubumfihlo bakho bubalulekile kakhulu kithi. Ngakho, siye ithuthukiswe le Ipholisi ukuze uqonde ukuthi thina ukuqoqa, ukusetshenziswa, ukuxhumana kanye sidalule futhi nokukusebenzisa lokho kwaziswa komuntu siqu. Okulandelayo ucacisa yobumfihlo yethu.
Ngaphambi noma ngesikhathi sokuniqoqela ulwazi lomuntu siqu, sizobe ukuhlonza izinhloso lapho ulwazi iqoqwe.
Sizokwenza siyisebenzise kolwazi lomuntu siqu kuphela ngomgomo yokugcwalisa zinhloso eshiwo nathi nezinye izinjongo ehambisanayo, ngaphandle uma sithola imvume ngabanye othintekayo noma njengoba kudingwa ngumthetho.
Sizokwenza kuphela ukugcina imininingwane ephathelene nawe njengemali nje kunesidingo sokuba kugcwaliseke zinhloso.
Sizokwenza ukuqoqa ulwazi lomuntu siqu esebenzisa semthethweni fair and, lapho kufanele khona, ngolwazi noma imvume yalowo muntfu othintekayo.
Idatha yomuntu siqu kufanele kube lusizo nezinhloso okuyiwona lotawusetjentiswa, futhi, kwaze kwaba sezingeni elidingekayo zinhloso, Kufanele kube olunembile, ephelele, futhi up-to-date.
Sizokwenza ukuvikela imininingwane yakho nge security neyayisiza kunengqondo ngokumelene ukulahleka noma ukweba, kanye nokufinyelela okungagunyaziwe, ukuvezwa, kukopa, Ukusetshenziswa noma ukuguqulwa.
Sizokwenza kalula amakhasimende ulwazi mayelana nezinqubomgomo zethu kanye nemikhuba ephathelene nokuphathwa kolwazi lomuntu siqu.
Sizibophezele beqhuba ibhizinisi lethu ngokuhambisana nalezi zimiso ukuze kuqinisekiswe ukuthi ubumfihlo bokwaziswa siqu livikelwe futhi inakekelwe.